Silence S03 Cargo – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
တိတ်ဆိတ်မှုကို S03 မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်ဆက်သားန်ဆောင်မှုများအတွက်ထိရောက်သောနှင့်နည်းပညာအရည်အသွေးမြင့် 3-ဘီးလျှပ်စစ် Scooter ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Scooter ဂေဟစနစ် mobility ထံအပ်နှံသောစပိန်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံရှိပြီးအမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ S03 သာ. ကြီးမြတ်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ကုန်တင်စွမ်းရည်များအတွက်သုံးဘီးနှင့်အတူပေါ်ပြူလာ S02 Scooter ၏အထူးဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနောက်ဘက်ပလက်ဖောင်း 125 ကီလိုဂရမ်ကုန်တင်သယ်ဆောင်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအလင်းအလေးချိန်ယာဉ်မောင်းမိုးသည်းထန်စွာသို့မဟုတ်ကြီးမားသောကုန်တင်နှင့်အတူလုံခြုံစွာ Scooter သုံးစွဲဖို့စေသည်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါနောက်ဘက်ရပ်ဆိုင်းမှုမမှန်အနေအထားများပေါ်ကားမောင်းနေစဉ်ပျက်စီးလွယ်ကုန်တင်၏ဘေးကင်းလုံခြုံပေးပို့ enable လုပ်ဖို့ optimized ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Scooter အကောင်းဆုံးတည်ငြိမ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးနှင့် Two-ဘီးတပ်ယာဉ် S02 မော်ဒယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောကုန်းတက်တောင်တက်စွမ်းရည်ပေးပါသည်။
အဆိုပါ Scooter In-ဘီး 2x 2,000 ဝပ်သို့မဟုတ် 2x 4000 watt 90 km / h ၏ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းများအတွက်လျှပ်စစ်မော်တာနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ Scooter2ဖြုတ်ဘက်ထရီများအတွက်စွမ်းရည်ရှိပြီး2(double-) ဘက်ထရီ options များနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်: 215 ကီလိုမီတာမှ 90 ကီလိုမီတာအကွာအဝေး 12 ကီလိုဝပ်နာရီမှ4ကီလိုဝပ်နာရီ။ အဆိုပါ Scooter တစ်ဦးရှိပါတယ် ဘက်ထရီထပ်ဆင့်တင်ခြင်းစနစ် ဘက်ထရီ၏သက်တမ်းသေချာကြောင်း (BBS) ။ အဆိုပါ Scooter တစ်ဦး 600 ဝပ်အားသွင်းတည်ဆောက်ထားသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါ S03 40 L ကို 90 L ကို 200 L ကို boxes တွေကိုပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ Scooter (မောင်းသူအပါအဝင်) 300 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်သယ်ယူပို့ဆောင်နေတဲ့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Scooter ထုံးစံအထူးတောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Scooter ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်လုံခြုံရေးကင်းလှည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်ရဲသို့မဟုတ်လုံခြုံရေးအေးဂျင့်ကိရိယာအစုံနှင့်အတူအမိန့်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter ရှေ့ပလက်ဖောင်းနှင့် smart ဖုန်းကိုကိုင်ဆောင်သူအတွက်ကုန်တင်ကိုင်ဖို့ mounting ချိတ်ပေးထားပါတယ်။
စီးတီး, အားကစားနှင့် Eco: အဆိုပါ Scooter3မောင်းနှင်မှု Modes သာရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter တစ်ပြောင်းပြန် mode ကိုရှိပြီးတစ်ဦးရှိပါတယ် Kinetic Energy က Recovery ကို System ကို ဘရိတ်ကနေရသောစွမ်းအင်အတွက် (KERS) သို့မဟုတ်ရုပ်ပျိုဘရိတ်ဘက်ထရီမှပြန်လာသောဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter 4.5 စက္ကန့်အတွင်း0င်ကနေ 50 km / h မှ accelerates ။ အဆိုပါ Scooter 90 km / h ၏ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းနှင့်အတူမော်တာ Scooter မူကွဲအဖြစ်ကိုအပ်နိုင်ပါတယ်။